Wararka Maanta: Sabti, Mar 10, 2018-Khudbadii Jawaari ee furitaanka Kalfadhigii 3aad ee baarlamaanka Soomaaliya
Sabti, Maarso, 10, 2018 (HOL)–Afhayeenka golaha shacabka Soomaaliyeed Prof Maxamed Cismaan Jawaari oo maanta ka hadlayay furitaanta kalfadhiga 3aad ee Baarlamanka Soomaaliya ayaa xukuumadda federaalka ka codsaday inay dardar geliso ballan qaadyo dhowr ah oo ay soo jeediyeen kal fadhigii kan ka horreeyay.
Mudane; Jawaari ayaa sheegay in muddada yar ee ay haystaan inta lagu gudo jira kalfadhigaan ay isku dayi doonaan , dib u dejinta dastuurka, habaynta hay’adaha difaaca dalka, sal u dhigidda fadaraalaynta dalka, Dimuqaraadiyeynta Soomaaliya, ka go’aan gaaridda maqaamka magaalada Muqdisho.
Wuxuu guddoomiye Jawaari ammaan ballaaRan usoo jeediyay Baarlamanka 10 aad oo uu ku tilmaamay inay ka shaqa badan yihiin kii 9aad 42%, wuxuuna intaa raaciyay inay meel mariyeen muddadii yarayd ee ay shaqaynayeen 33 go’aan, halka Baarlamankii kan ka horreeyayna ay meel mariyeen 14 oo keliya.
Prof: Jawaari ayaa dul istaagay wax qabadkii xukuumadda oo ay ka mid yihiin soo deynta maxaabiis Soomaaliyeed oo ku xirnayd dalal shisheeye, hir gelinta xarumo Dowladeed oo aad u fara badan, goobahaas oo ay booqasho ku tageen xubnaha Labada Aqal ee Baarlamanka.
Guddoomiye Jawaari ayaa ugu dambayntii ka codsaday ra’iisal wasaare Kheyre iyo guddiyada u xilsaaran dib u heshiisiinta iyo dib u eegista Dastuurka in ay dardar geliyaan soo gudbinta Ajandayaashaas, si uu Baarlamanku ugu doodo una meel mariyo, isagoo codsaday in lagu dhaqaaqo ballan qaadyadii ay hore u samaysay xukuumadda.